Kitranoantrano, gaboraraka, ala asa fay... :: Raikitra ny fanadiovana faobe an’ireo mpiasam-panjakana • AoRaha
Kitranoantrano, gaboraraka, ala asa fay… Raikitra ny fanadiovana faobe an’ireo mpiasam-panjakana
Hisoroka ny baranahiny rehetra momba ny asam-panjakana. Fepetra maro no indray nandatsahan’ ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, baiko ho fampiharana ny fitsipika hifehy ny mpiasam-
panjakana tsy ankanavaka, nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao, teny Iavoloha, afak’omaly.
Tapitra hatreo ny kitrano- antrano sy ny kolikoly amin’ ny fampidirana mpiasam-panjakana vaovao. Hoarahi-maso akaiky ny asan’ireo mpiasam-panjakana, ny fomba fiasany sy ny fahavitrihany. Horaiketina amin’ny alalan’ ny kajimirindra (logiciel) tokana ny fitantanana ireo mpiasam-panjakana manerana ny Nosy.
Iray volana ny fe-potoana nomena amin’ny fizàrana amin’ny fampiasana an’ilay hairaha ara-kajy mirindra « Augure ». Fitaovana hahafahana mamaritra ny tena isan’ireo mpiasampanjakana sy ny andraikitra sahaniny ary ny fahaizana ananan’izy ireo. «Ajanona ireo izay mpiasa tsy ilaina mba tsy handanindaniam-poana ny volam-panjakana », hoy ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra.
Hisy indray ny fanisana an’ireo mpiasam-panjakana tsy raikitra sy ireo efa tena mpiasam-panjakana. Hanaovana antso tolotra asa ihany koa ny fanoloana an’ireo mpiasam-panjakana misotro ronono sy efa nindaosin’ ny fahafatesana.
Nampahafantarin’ny Filoham-pirenena, afak’omaly, fa sehatra efatra no mila handraisana mpiasam-panjakana vaovao: ny faha- salamana, ny fandriampaha- lemana, ny fitsarana ary ny fampianarana. Mazava ihany koa manomboka izao fa tsy maintsy hahazoana fankatoavan’ny Filankevitry ny minisitra ny fanendrena sy fampidirana mpiasam-panjakana vaovao rehetra.
« Izany hoe mila mandresy lahatra an’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta sy ny Filohan’ ny Repoblika ny minisitra tsirairay hoe : ilay olona tokoa ve no tokony homena toerana ao amin’ilay minisitera », hoy ny fanampim-panazavan’ ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana, izay sady mpitondra tenin’ny governemanta.
Tsy mandà an’ireo fepetra ireo ny solontenan’ny mpiasa sasany izay naneho hevitra omaly. « Aoka hojerena manokana ireo tombontsoa tokony hisitrahan’ireo mpiasam-panjakana », hoy ny sekretera jeneralin’
ny Vovonana fiaraha-mientan’ny hetsika sendikaly eto Madagasikara (Ssm), Rakotomanga Barson. «Tsara ny fanavaozana sy ny fandraisana fepetra, saingy tsy tokony hatao amina endrika fampitahorana na fanilikilihana anay mpiasa izany. Mba tokony hojerena, ohatra, ny momba an’ireo mpiasa tsy raikitra ho lasa raikitra. Tsy tokony hisy ny fandroahana azy ireo fa azo atao tsara ny mamindra
toerana azy, araka ny fahaiza- manaony », hoy ihany izy.
Hafatra nalefany ny amin’ ny tokony hanatanterahana an’ireo fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena tamin’ny fampielezan-kevitra, toy ny fampiharana an’ilay fampiakarana ny karama farany ambany ho roa hetsy ariary.
Fandaminana eny ifotony :: Mitohy ny fifanolanana momba ny fanoloana sefo fokontany